Aragga, Qiyamka & Ethos
Asturnaanta iyo GDPR
Qalabka iyo Akhrinta Hore
sQuid waa hab sahlan, oo haboon ee lagu bixin karo lacagta dugsiga! sspid waa nidaam lacag bixineed oo internetka ah oo loo isticmaali karo bixinta lacago kala duwan oo dugsi. Waalidiintu waxay isticmaali karaan sspid si ay ugu bixiyaan lacagaha dugsiga sida tigidhada cashada, lacagaha safarka dugsiga iyo lacagaha kale ee dugsiga. Marka aan soo bandhigno sspid, waxaanu kuu soo diri doonaa faahfaahinta diiwaangelinta gaarka ah si aad u abuuri karto xisaab sspid ah iyo koontadaada internetka.
Halkeen ka bilaabaa?
sspid waa mid sahlan. Dhammaan waxaad u baahan tahay inaad sameyso si aad u bilowdo sspid waa inaad abuurto xisaab sspid ah.
Samee xisaab sspid ah
Muddo yar ka dib, waxaad naga heli doontaa warqad diiwaangalin ah oo leh lambarka 16 lambarkaaga lambarkaaga gaarka ah ee sspid iyo lambarka 3 lambar ee lambarka. Riix halkan si aad u abuurto akoonkaaga sspid iyo gali lambaradaas. Kadib waxaad awoodi doontaa inaad koontadaada koreeyso oo aad aragto dheelitirkaaga iyo macaamilkaaga.
Gali xisaabtaada sspid
Riix halkan si aad ugu soo gasho xisaabtaada sspid si aad u hubiso dheelitirkaaga, kor u kaca ama cusbooneysii faahfaahintaada shakhsiyeed iyo waxyaabaha aad door bidayso.
Sidee bay u aamin tahay nidaamka sspid?
sQuid waxay isticmaashaa ka hortagga khiyaanada iyo hanaanka ogaanshaha khibradda, waxayna u hoggaansamaan shuruudaha shuruudaha FCA.
Markaad sameysato xisaab sspid ah, waxaad geli kartaa kumbuyuutar, isla markaana waxaad ku hubin kartaa hadhaaga internetka markasta. Waxaad sidoo kale arki kartaa macaamiishaada internetka si aad u ogaatid inta lagaa qaatay iyo goorta. sspid wuxuu kuu soo diri doonaa xisaab-celin xisaabeed iyo xaqiijinta lacag bixinta adoo isticmaalaya email.
sQuid waa nidaamka ugu hooseeya ee lagu wadaago nidaamka guud ee macaamiisha, maaddaama ay leedahay qaababka ugu ballaaran ee xulashooyinka sare ee aad heli karto.
Waxaad ku dallaci kartaa kareedhit ama kaarka deynta, ama bedelka bangiga. Waxaad sidoo kale si ammaan ah u keydsan kartaa debit ama credit
faahfaahinta lacag-bixinta degdegga ah, iyo xitaa aasaasida Korontada si aanad waligeed uga dhicin lacagahaaga
xisaabta (waxaanu ku talineynaa tan sida aad waligaa uga walwalin miisaaniyada hooseeya).
Fadlan riix halkan si aad u aragto bogga taageerada sspid ee waalidiinta, ama hanuunin dheeraad ah, riix halkan si aad u aragto fiidiyowyo talaabo talaabo talaabo ah.
• Lacag-bixinta internetka ee leh awoodda lagu kaydin karo faahfaahinta kaararka bixinta lacagaha si dhakhso ah
• Si sahlan loo isticmaali karo, 24/7, bogga macmiilka ee internetka
• Ka eeg taariikhda isweydaarsiga internetka
• Warbixinada xisaabaadka iyo xaqiijinta lacag bixinta adoo isticmaalaya email
• Kooxda adeegga macaamiisha
• Looma baahna jadwal qoraal ah ama lacag u diridda dugsiga
Soo qaado sspid App hadda
Barnaamijka sspid waa bilaash inuu ka soo degsado qalabyada iOS iyo Android wuxuuna bixiyaa hab deg deg ah oo haboon oo lagu galo, loo maamulo loona kordhiyo xisaabtaada sspid online.
Si aad u soo iibsato sspid App on macruufka ah iyo qalabka Android, fadlan guji xiriirada download ee ku habboon hoosta, ama raadi 'sQuidcard' ee dukaamada ku haboon.